Sweden iyo Kolombiya oo saxiixdey wadashaqeeyn dhanka ciidanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka kheyraadka Sweden Mikael Damberg, (S) sawir: Pavel Koubek/TT
Sweden iyo Kolombiya oo saxiixdey wadashaqeeyn dhanka ciidanka
La cusbooneeyay onsdag 15 mars 2017 kl 11.30
La daabacay onsdag 15 mars 2017 kl 09.50
Wasiirka kheyraadka Sweden Mikael Damberg oo booqasho ku maraya dalka Kolombiya ayaa shalayto qalinka ku duugay heshiis dhanka wada-shaqeeynta arrimmaha difaaca.
Heshiiskan ayaa tallaabadii ugu horreeysay u noqon kara inay shirkadda Saab u iib-geeyso dalka Kolombiya dayuurradaha dagaalka ee Gripen.
– Xaqiiqdii, waxaan goob joog ka ahaa kulan aan ku saxiixay wada-shaqeeyn dhanka difaaca oo dhex-marta labada waddan ee Sweden iyo Kolombiya. Wasaaradda gaashaan-dhigga Kolombiya ayaa qayb ballaaran ka ahayd heshiiskii nabadda ee dalka Kolombiya. Waxaana masuuliyad ballaran ay ka saaran tahay sidii heshiiskaa loo dhaqan gelin lahaa, halka dhanka kale ay qayb wayn ka tahay sidii wasaaradda gaanshaa-dhigga loo qalabeeyn lahaa, sida uu sheegay wasiirka khayraadka Sweden Mikael Damberg.
"Maal-gelin ballaaran" – waxay noqon karaan iibsiga dayuurradaha dagaalka. Waana midda ay rajeeynayso shirkadda Saab, oo sannadihii ugu dambeeyey ku howlanayd sidii ay saameeyn ugu yeelan lahayd inuu dalka Kolombiya iibsado dayuurradaha dagaalka ee JAS Gripen, iyadoona ay shirkaddu dalkaasi Kolombiya u dirtay duuliyeyaal sidii ey aqoon-kororsi u siin lahayd ciidammada cirka ee dalka Kolombiya.
Dalka Kolombiya ayaa dhowaantan heshiis nabadeed ey kala saxiixdeen jabhadda Farc oo ay muddo sha sannadood ah waan-waan u socotay, hase yeeshee aanay jabhaddu weli hub-dhigis sameeyn. Waxaa sidoo kale ey waan-waan nabadeed u bilaabatay dawladda Kolombiya iyo jabhadda labaad ee ugu dhumucda wayn - jabhadda ELN.
Ururrada u dooda xuquuqda bani’aadamka ayaa dhaleeceeyn u jeediyay heshiiska dhex maray Sweden iyo dalka Kolombiya iyadoona uu xildhibaan Iván Cepeda, isla-markaana u dooda xuquuqda bani’aadamka uu sheegay inuu heshiiskani yahay mid aan wanaagsanayn iyo sidoo kale in dalka Sweden uu dayuurrado dagaal ka iibiyo dalka Kolombiya.
Wasiirka kheyraadka Sweden Mikael Damberg ayaa hoosta ka xariiqay inuu dalka Sweden gacan ka geeystay siduu ciidammada qalabka sida ee dalka Kolombiya gacan uga siin lahaa arrimmaha la xiriira dhowrista xuquuqda sinnaanta iyo xuquuqda bani’aadamka, ugu dambeeynta ay tahay mid u taala hayadda kontroolka hubka ee magaceeda loo soo gaabiyo ISP inuu dalka Sweden dayuurrado dagaal ka iibiyo dalka Kolombiya.
Sannadkii 2008 oo uu maamulkii dalka ka jiray uu gacan ka siiyay sidii ay shirkadda saab uga iibin lahayd dalka Kolombiya qalabka raadaarka ayey qayb ka mid xisbigii mucaaradka ee waagaasi Socialdemokraterna dhaleeceeyn u soo jeediyeen falkaasi. Hase yeeshee uu Mikael Damberg, (S) sheegay iminka in xaaladda dalka Kolombiya ka aloosan maanta ay tahay mid ka duwan.
– Xaaladda ayay wax iska badaleen wixii waagaa ka dambeeyay, sidoo kale waxaa iminka jira hayad ku shaqa leh ammuurtaa. Sida aan og-soonahayna waxay hayaddu nal cagaaran u fidisay sidii qalab noocaasi ah loo iib geeyn lahaa, sida uu sheegay wasiirka kheeyraadka Mikael Damberg.